10 यूरोपमा स्नोर्कलिंगका लागि उत्तम ठाउँहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा आइसल्याण्ड > 10 यूरोपमा स्नोर्कलिंगका लागि उत्तम ठाउँहरू
समुद्री अर्किन्स, समुद्री घोडा, चम्किलो रंगीन जीव, र संसारको स्पष्ट पानी केहि, यी मा snorkeling 10 स्थानहरू दिमागमा उड्ने साहसिक कार्य हो. यी 10 युरोपमा स्नोरकेलिंगका लागि उत्तम ठाउँहरू, मा एक आश्चर्यजनक दृश्यता छ 20 एम. पानीमुनि, र पृथ्वीमा सब भन्दा मनमोहक समुद्री जीवनको घर हो.
1. बेलायतमा स्नोर्कलिंगका लागि उत्तम स्थान: devon
चट्टानी टापुबाट लन्डन ब्रिज, टोर बेको उत्तरमा, यहाँ तपाईले युकेमा सब भन्दा सुन्दर स्नोर्कलिंग ठाउँहरू पाउनुहुनेछ. चहकिलो गुलाबी र पहेलोको एरेमा गहना एनीमोनहरू, mussels, र अद्वितीय tompot blennies माछा, तपाईं एक लन्डन ब्रिज मा एक snorkeling एक पूरा दिन खर्च गर्न सक्नुहुनेछ.
बेलायत र डेभनका धेरै आगन्तुकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ कि उनीहरू युरोपको सब भन्दा राम्रो स्नोर्कलिंग स्थानहरूमा यात्रा गरिरहेका छन्. तथापि, डेभन एक शानदार स्नोर्कलिंग र डाइभिiving गन्तव्य यूके हो. लन्डन ब्रिजको अतिरिक्त, Lundy टापु अर्को स्नोर्कलिंग मणि हो, खरानी मोहरको साथ, चन्द्र जेलीफिश, र डल्फिन हेर्न.
2. पोर्तुगालमा स्नोर्कलिंगका लागि उत्तम ठाउँ: बिग बेर्लेन्गा
पोर्तुगाल यसको शानदार समुद्री तटहरूको लागि प्रसिद्ध छ, बर्लेन्गा ग्रान्डे टापु यसको अपवाद छैन. बस 10 Peniche बाट किलोमिटर टाढा, को को एक 10 युरोपमा सब भन्दा आश्चर्यजनक सर्फिंग स्थानहरू, बर्लेन्गा एक भव्य द्वीपसमूह हो. यसले समावेश गर्दछ3काभर्नको सानो टापु, गाढा निलो पानी, र एक जहाज दुर्घटना.
मामला मा तपाईं सोच थिए, तपाईं स्नोर्कलिंग गियरको साथ जहाज भत्काउन सक्नुहुन्छ. यसबाहेक, सूर्यफिस जस्ता समुद्री जीवहरूको अद्भुत अटलान्टिक पानीमुनि संसार, कोरलहरू, मास्क भन्दा पर तपाइँको लागि पर्खिरहेको हुनेछ. पुरानो फोर्ट सान जुआन बाउटिस्टा यस सुन्दर क्षेत्रलाई नहेर्ने आँखाको अगाडि तपाईं आउनुहुनेछ, सम्पूर्ण अनुभवमा रहस्य थप्दै.
3. पोर्ट क्रस राष्ट्रीय पार्क, फ्रान्स
को गहिराई सम्म 8 एम. विशेष स्नोर्केल ट्रेलमा, तपाईं पोर्ट क्रोसमा सयौं माछाहरूको प्रशंसा गरिरहनु भएको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज. यो सब भन्दा पुरानो मरीना प्रकृति रिजर्व यूरोप मा एक राम्रो स्नोर्कलिंग स्थान हो. प्लाज डे ला पलड तपाईंको स्नोर्क्लिling्ग साहसिक कार्य सुरू गर्न उत्तम स्थान हो.
यस सूचीमा अन्य आश्चर्यजनक स्नोर्कलिंग स्थानहरूको विपरित, यहाँ तपाईं पाउनुहुनेछ6तपाइँले भेट्नु भएको समुद्री जीवहरूको बारेमा रोचक तथ्यहरूको साथ जानकारीमूलक बुओहरू: पूर्वी अटलांटिक मयूर Wrasse, चित्रित कम्बर, दुर्लभ डस्की ग्रुपहरू, र अन्य धेरै रंगीन माछा.
4. ला सिल्फ़्रा, आइसल्याण्ड
मध्येको एउटा संसारमा सबै भन्दा राम्रो डाइभि places ठाउँहरू, स्पष्टतः ला सिल्फ़्रा युरोपमा एक महाकाव्य स्नोरकेलिंग स्थान हो. बीच पौंडी2यूरोपियन महाद्वीपहरू, परिवार संग, वा साथीहरू, ल्या Langजोकुल ग्लेशियरबाट पानी पग्लने क्रममा, एक अविस्मरणीय अनुभव हो.
सिल्फ्रा संसारमा स्नोर्कलिंगका लागि उत्तम स्थानहरू मध्ये एक हो, मा अद्भुत दृश्यता को कारण 100 एम. रंग पानीमुनि, चट्टानी ट्रेल्स र कोभ्स बीच पौडी खेल्ने, र यो सबै महिमा रिक्जाविकबाट एक घण्टाको दूरीमा छ. पानी धेरै चिसो हुन जान्छ, तपाईंले स्नोर्कलिंग टुर बुक गर्नु पर्छ, एक राम्रो swimsuit र गियर को साथ तपाइँ न्यानो राख्न.
5. रातो टापु, सर्डिनिया, इटाली
स्पष्ट मूल पानी एक आश्चर्यजनक स्नोर्कलिंग अनुभवको लागि आवश्यक छ. सार्डिनियामा इसोला रोसाले रमाईलो स्नोरकेलिंगका लागि उत्तम सर्तहरू पाएको छ: खाली पानी, चट्टानी परिदृश्य र caverns, समुद्री जीवन जुन तपाईंको दिमागमा धम्की दिनेछ, र सेतो रेतीले समुद्री तटहरू तपाईंको सास फेर्न, स्नोरकेलि। सत्रहरूका बीच.
तपाईं साना मछुवाहरूको गाउँ भेट्टाउनुहुनेछ, उत्तर पश्चिम सार्डिनियामा इसोला रोसा. कोरलहरू, माछा, र रातो चट्टानहरू गर्मी बिदाको लागि उत्तम सेटिंग हुन्. सूर्यबालीका साथै, तपाईं पानी खेल आनन्द उठाउन सक्छ, स्कुबा डाइभि, र इटालियन तटमा विन्डसर्फिंग. त्यसैले, वाटरप्रूफ ब्याग प्याक गर्न निश्चित हुनुहोस्, र सार्डिनियाको पानीमुनि संसार सम्झनको लागि एक पानीमुनि क्यामेरा.
6. Cabrera द्वीपसमूह राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्पेन
19 सानो टापुहरूले क्याब्रेरा द्वीपसमूहलाई मिश्रित गर्दछ, एउटा अद्भुत समुद्री इकोसिस्टमको घर, मानव द्वारा अछुत. निलो गुफा, समुद्री प्रकृति आरक्षित यूरोप मा एक धनी हो, र तपाइँको स्नोर्कलिंग अभियानमा, तपाईंले भन्दा बढि पत्ता लगाउनु हुनेछ 500 प्रजाति. Scorpionfish, अक्टोपस, कछुवा छाला, तपाईले भेट्ने समुद्रका केहि जीवहरू हुन्.
यसबाहेक, तपाईं डु from्गाबाट केहि डल्फिनहरू देख्न एक अचम्मको मौका प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, Cabrera आफ्नो बाटो मा. स्पेनिश तटवर्ती यूरोप मा सबैभन्दा लोकप्रिय गर्मी स्थलहरु मध्ये एक हो, र मल्लोर्का दुनिया भरका यात्रीहरूको लागि एक काल्पनिक समुद्र तट गन्तव्य हो. त्यसैले, तपाईंको swimsuit र स्नोरकल गियर प्याक गर्नुहोस्, एक अविस्मरणीय र आरामदायक यात्रा काभ्रेराको लागि.
7. वाल्चेसी ताल म्यूनिख
विशाल, निलो, र गहिरो, ताल वाल्चेन्सी जर्मनीको एक भव्य अल्पाइन ताल हो. 75 म्युनिकबाट KM, यस स्नोर्कलिंग गन्तव्य मा स्थित छ बभेरियन क्षेत्रको केन्द्र. त्यसैले, तपाईं हवा र विश्राम को लागी आउँदा, को तपाईको वरिपरि दर्शनीय दृश्यहरु एक ईश्वरीय अनुभव को लागी सबैभन्दा निर्मल सेटिंग प्रदान गर्नुहोस्.
M मिनेट २० मिनेटमा ठूलो दृश्यताको साथ, ताल वाल्चेन्सी एक हो 10 युरोपमा सर्वश्रेष्ठ स्नोरकेलिंग स्थानहरू. यसबाहेक, तपाई गहिरो र इन्द्रेणी टोउ र ईल्स भन्दा बढी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, स्पष्ट पानी तालमा, तपाईं वाल्चेन्सी तालमा डाइभिंग गर्न जाँदा.
8. अस्ट्रिया मा नदी स्नोर्कलिंग: Viecht Am Traunfall
जबकि अधिकांश व्यक्तिहरूले तपाईंलाई भूमध्यसागरमा स्नोर्क्लि tell गर्न गाह्रो अनुभव बताउँछन्, नदी स्नोरकलिंग असाधारण छ. शान्त ताजा पिरोइज पानी, माथिल्लो अस्ट्रियामा, Viecht am Traunfall अस्ट्रिया मा स्नोर्कलिंग को लागी राम्रो स्थान हो. Viecht am Traunfall नदी सुन्दर कोरलहरूको घर छ, र यी सुन्दरताको लागि तपाईंको यात्रामा, तपाईंलाई रक जम्पि and र क्यानियोनिंगमा आमन्त्रित गरिनेछ.
त्यसैले, अस्ट्रिया आल्प्स मा स्नोर्कलिंग यूरोप मा एक धेरै रोमांचक स्नोर्कलिंग अनुभव हो. एकचोटि तपाईंले आफ्नो स्नोर्कलिंग यात्रा पूरा गर्नुभयो, हरियो पहाड र नदी दृश्य हो उत्तम पिकनिक र विश्राम स्थान. यहाँ, तपाईले पाउनुभएको आश्चर्यजनक अन्डरवाटर शटहरूको समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, र अस्ट्रिया ल्याण्डस्केपमा ताजा पर्वतीय हावाको आनन्द लिनुहोस्.
9. मेडेस टापु स्पेन
मेडेस टापु सुन्दर प्रकृति आरक्षित डेल मोन्टग्रीको हिस्सा हुन्. परम स्पेनिश गर्मी गन्तव्य मा अवस्थित, कोस्टा ब्राभा, मेडेस शानदार समुद्री जीवनको लागि घर हुन्. यदि तपाईं समुद्री जीवनबाट मोहित हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए यहाँ स्नोरकेलि।, अविस्मरणीय हुनेछ.
मादेका सात टापुहरू, क्याटालोनिन तटमा, चिसो भूमध्य सागर द्वारा घेरिएको एक स्नोर्कलिंग स्वर्ग हो. वास्तबमा, कोस्टा ब्राभामा छुट्टीको बेला मेडिसमा स्नोरक्लि the्ग शीर्ष कार्यहरू मध्ये एक हो. बच्चाहरु संग, साथीहरु, वा एकल, मादी सुन्दर जीव जन्तुको घर छन्, समुद्री घोडा, समुद्री तारा, र ब्याराकुडास.
10. यूरोपमा स्नोर्कलिंगका लागि उत्तम ठाउँहरू: एल्बा इटाली
एक तर्फ रेड gorgonians, किनारको अर्को पट्टि रातो र कालो कोरलहरू, एल्बा स्वर्ग हो. एल्बाको टापुमा सन्त Andrea को खाडी हो जहाँ कुनै पनि पानी भित्रको साहसिक कार्य सुरु हुन्छ. पोर्ट र प्रोमेनेडबाट टाढा, यस टस्कन टापुमा समुद्री जीवन अचम्मको छ.
सुन्दर कोरलका साथै, माछा, र जीव जन्तु, इटालियन तट विश्व मा एक उत्तम हो. त्यसैले, यदि तपाईंले गुफा अन्वेषण र सनफिशको खोजीको बीचमा सास फेर्न आवश्यक छ भने, त्यसो भए एल्बाको बलुवा समुद्री किनारहरू उत्तम आराम गर्ने ठाउँ हुन्.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई यी मध्ये सब भन्दा अचम्मको पानीमुनि संसारहरूको एक अविस्मरणीय यात्राको योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं 10 रेलमार्फत युरोपमा स्नोरक्लिंगका लागि उत्तम ठाउँहरू.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपमा स्नोरकेलिंगका लागि १o सर्वश्रेष्ठ स्थानहरू" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fbest-places-snorkeling-europe%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
MarineLife स्थानहरु स्नोर्कलिंग को लागी स्नोर्कलिंग Snorkelingin यूरोप पानीमुनि जीवन